बिटकोइन माइन गर्दा कसरी निस्किन्छ फोहोरको डुङ्गुर – Bishwo Ghatana – World News
By विश्व घटना	 On ६ आश्विन २०७८, बुधबार १६:३९
बिटकोइन बनाउने प्रक्रिया अर्थात् माइनिङबाट ठूलो परिमाणमा विद्युतीय फोहोर उत्पादन हुने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। त्यसरी बन्ने फोहोरको परिमाण द नेदरल्यान्ड्सजस्तो देशमा सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित खेर जाने साना उपकरणसँग तुलना गर्न सकिने देखिएको छ।
दुई अनुसन्धानकर्ता एलेक्स डि भ्रज र क्रिस्टियन स्टलको आकलनअनुसार क्रिप्टोकरेन्सी उत्पादन गर्दा प्रत्येक वर्ष ३०,७०० टन विद्युतीय फोहोर बन्छ। औसतमा प्रतिकारोबार २७२ ग्राम फोहोर उत्पादन हुन्छ। तुलनाका लागि हामीले के जानिराखौँ भने आईफोन १३ को तौल १७३ ग्राम छ।
माइनरहरूले नयाँ बिटकोइन बनाएर पैसा कमाउँछन्। तर त्यसका लागि आवश्यक “कम्प्युटिङ” प्रक्रियाले ठूलो परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्छ। उनीहरू विद्युतीय मुद्राको स्वामित्व लिने अवसरका लागि बिटकोइन कारोबारको अडिट गर्छन्।
त्यसका लागि प्रयोग हुने विद्युत्‌ तथा परिणामस्वरूप हुने हरितगृह ग्यासको प्रदूषणमा अहिले ध्यानाकृष्ट भएको छ। अहिले उपभोग हुने बिजुलीको परिमाण द फिलिपिन्सको भन्दा बढी छ। तर माइनिङका लागि प्रयुक्त कम्प्युटरहरू थोत्रा भएपछि ती पनि विद्युतीय फोहोर बन्छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार बिटकोइन माइन गर्ने उपकरणहरूको औसत आयु १.२९ वर्ष छ।
फलतः उक्त कामबाट बन्ने विद्युतीय फोहोर द नेदरल्यान्ड्सजस्तो देशको “साना आईटी तथा सञ्चार उपकरण”को फोहोरजति हुने डि भ्रज र स्टलको अनुमान छ। विद्युतीय फोहोरको त्यो श्रेणीमा मोबाइल फोन, पर्सनल कम्प्युटर, प्रिन्टर र टेलिफोनहरू पर्छन्। यो अनुसन्धान रिसोर्सेस, कन्जर्भेशन एन्ड रिसाइक्लिङ नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ।
आखिर! जुनकिरीको जीउमा कसरी बत्ती बल्छ ?3views